मह खाँदा यति धेरै फाइदा ! – Nepali Health
मह खाँदा यति धेरै फाइदा !
२०७३ पुष २६ गते १४:४७ मा प्रकाशित
मह खाँदा जति मिठो हुन्छ, त्यो भन्दा बढी स्वास्थ्यका लागि फाइदा पनि गर्छ । रगत सफा राख्ने देखि लिएर रक्तचाप नियन्त्रण गर्नेसम्मको काम यसले गर्छ । कतिपय अवस्थामा एन्टीबायोटिकको काम समेत गर्छ ।
तर : एक वर्षभन्दा कमका बालबालिकालाई मह खुवाउनु उचित हुँदैन । किनकि यसमा बोटुलिज्म ब्याक्टेरियाको जीवाणु हुन सक्छ । जसले शिशुलाई बिरामी बनाउन सक्छ । यो जीवाणु धुलो र माटोमा पाइन्छ, जुन महमा पनि टाँसिन सक्छ । एक वर्षमुनिको बच्चामा ब्याक्टेरियाको संक्रमणसँग जुध्न सक्ने अवस्था भइसकेको हुँदैन ।
कहाँ हराउँछ ग्रामीण क्षेत्रमा जाने औषधि ?
अब जिल्लाहरुले पाँच लाख सम्मको औषधि सोझै खरीद गर्न सक्ने